Vinicius Jr oo sheegay ciyaaryahanka uu kaga daydo kubadda cagta – Gool FM
Vinicius Jr oo sheegay ciyaaryahanka uu kaga daydo kubadda cagta
(Madrid) 08 Juunyo 2019. Ciyaaryahanka da’ada yar reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Vinicius Jr ayaa xaqiijiyay in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Neymar Jr uu yahay ciyaaryahanka uu kaga daydo kubadda cagta.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Vinicius Jr wuxuuna si cad u sheegay ciyaaryahanka uu kaga daydo kubadda cagta:
“Neymar waa ciyaaryahanka aan kaga daydo kubadda cagta, waxaan isku dayaa inaan ku daydo waxyaabo badan oo qaabkiisa ah”.
“Wuxuu had iyo jeer ii soo diraa fiidiyoowyo ku saabsan qaab ciyaareedkiisa wuxuuna ii sheegaa inaan sidan sameeyo, wuxuu sameeyaa wax aan qofna sameyn karin”.
“Ronaldinho waa mid ka mid ah ciyaartoyda aan daawado, waxaan daawadaa fiidiyoowgiisa si aan wax uga barto, Neymar iyo Ronaldinho waa xiddigaha aan kaga daydo kubadda cagta”.
Yeelkadeeda, Vinicius Jr ayaa u sharaxanaa inuu noqon doono badalka Neymar Jr liiska xiddigaha xulka qaranka Brazil ee ka qeyb galaya tartanka Copa America, kasoo bartamaha bishan ka furmi doono dalka Brazil, balse tababare Tite ayaa doorbiday inuu booskaas uu buuxiyo xiddiga kooxda Chelsea ee Willian.